စပါးစျေး စံချိန်တင်မြင့်တက်လာသော်လည်း ဆီစျေး အထွေထွေစားရိတ်ကြောင့် တောင်သူများအကျိုးအမြတ်မရဖြစ်နေ….
June 19, 2022 dokonetwork2021 0
ေ႐ႊဘိုေပၚဆန္း စပါး တင္းတစ္ရာ က်ပ္ ၁၅ သိန္းေက်ာ္လာၿပီး တစ္လအတြင္း က်ပ္ ၅ ေသာင္း ျမႇင့္တက္လာ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕မွာ ေ႐ႊဘိုေပၚဆန္း စပါးတင္းတစ္ရာကို ဇြန္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း က်ပ္ ၁၅ သိန္း ၅ ေသာင္း ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး တစ္လအတြင္း က်ပ္ ၅ ေသာင္း ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ စီးပြားေရးနဲ႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕မွာ ေ႐ႊဘိုေပၚဆန္း ၂၄ ျပည္ဆန္တစ္အိတ္ကိုေတာ့ က်ပ္ ၅ ေသာင္းခြဲေပါက္ေဈး […]
၁၉.၆.၂၀၂၂ တနင်္ဂနွေနေ့ (ယနေ့) ဖြစ်ပေါ်နေသော ရွှေစျေး ၊ စက်သုံးဆီစျေးနှင့် နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းထားများ……
တောတွင်းတစ်နေရာကနေ အငြိမ့်က၍ အမေစု ၇၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ ‌လက်ဆောင် ပေးလိုက်ကြသော အနုပညာ PDF မောင်နှမတစ်စု
အမေစု ၇၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက် ၇၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် တော်လှန်ရေး အနုပညာရှင်များဖြစ်သော ဟားငါးကောင်အဖွဲ့မှ ပြည်သူများသို့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ ၇၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရ #ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေစု ၇၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက် ၇၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် တော်လှန်ရေး အနုပညာရှင်များဖြစ်သော ဟားငါးကောင်အဖွဲ့မှ ပြည်သူများသို့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ ၇၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရ […]
မန္တလေးမြို့လယ်က စစ်တပ်ပိုင် မြဝတီဘဏ်ကို ထပ်မံဗုံးထုတိုက်ခိုက်(ရုပ်သံ)
မန္တလေးမြို့လယ်က စစ်တပ်ပိုင် မြဝတီဘဏ်ကို ထပ်မံဗုံးထုတိုက်ခိုက် MFP ၊ ဇွန် – ၁၉ မန္တလေးမြို့လယ်မှာရှိတဲ့ စစ်တပ်ပိုင် မြဝတီဘဏ်ကို ဒီနေ့ ဇွန်လ (၁၉)ရက် ညနေပိုင်းမှာ ဗုံးထုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ပြောက်ကျားအဖွဲ့တွေဆီက သိရပါတယ်။ (၈၁)လမ်း၊ (၂၆)လမ်းနဲ့ (၂၇)လမ်းကြားမှာရှိတဲ့ စစ်တပ်ပိုင် မြဝတီဘဏ် လုံခြုံရေးဘန်ကာကို ဗုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ အနည်းဆုံး စစ်သားတစ်ယောက် ထိခိုက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့လည်း အဲဒီအဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။ ဗုံးထုတိုက်ခိုက်နေချိန် လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦး မတော်တဆ […]
မွေးနေ့အတွက် အဲဒီကတိနဲ့ မွေးနေ့‌လက်ဆောင်ပို့လိုက်ပါတယ် အမေ…….
အမေ ……. အမေလည်း အကျယ်ချုပ်ကျ‌နေသလို ကျနော်တို့တတိုင်းပြည်လုံးလည်း အမေနဲ့အတူ တနေ့တည်း အကျယ်ချုပ်ကျခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် အမေဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ တခါပြန်မွေးဖွားခွင့်ရအုံးမှာဖြစ်သလို သမိုင်းမှာ ကျနော်တို့နိုင်ငံလည်း သစ်လွင်တောက်ပစွာနဲ့ လွတ်မြောက်ရှင်သန် တခါပြန်မွေးဖွားခွင့်ရ‌စေရပါမယ်……. အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ နောက်မတွန့်တမ်း ကြိုးစားမှာပါ မွေးနေ့အတွက် အဲဒီကတိနဲ့ မွေးနေ့‌လက်ဆောင်ပို့လိုက်ပါတယ် အမေ……. အမေ ……. အမေလည်း အကျယ်ချုပ်ကျ‌နေသလို ကျနော်တို့တတိုင်းပြည်လုံးလည်း အမေနဲ့အတူ တနေ့တည်း အကျယ်ချုပ်ကျခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် […]
” ဆို့နင့်သွားတဲ့အတ္တ “
” ဆို႔နင့္သြားတဲ့အတၱ ” ဒါသူ႔အေမေလ သူ႔ကို ဝမ္းနဲ႔လြယ္ေမြးခဲ့တဲ့ အေမမာတာမိခင္ေလ။ တကယ္ဆိုရင္..,သူ႔အေမေမြးေန႔ကိတ္မွာဖေယာင္းတိုင္ေလးေတြစိုက္ထူ မီးေတာက္ေလးေတြအတူမႈတ္ၿငိမ္းရမဲ့သူဟာသူ … ျဖစ္ရမွာ ။ တကယ္ဆိုရင္..,သူ႔အေမေမြးေန႔မွာသူ႔အေမခြံ႕ေကြၽးတဲ့ ကိတ္မုန္႔ကို ပလုပ္ပေလာင္းနဲ႔ပထမဆုံးစားခြင့္ရမဲ့သူဟာသူ .. ျဖစ္ရမွာ။ တကယ္ဆိုရင္..,အေရးအေၾကာင္းတခ်ိဳ႕ယွက္ေနတဲ့သူ႔အေမရဲ႕ပါးျပင္ပန္းဝတ္လႊာ ကို႐ိုေသျခင္းေလးျမတ္ျခင္းခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာ နဲ႔အနမ္းပြင့္ဂါရဝအရင္ဆုံးျပဳခြင့္ရသူဟာသူ … ျဖစ္ရမွာ ။ အခုအေျခမေတာ့…,သူ႔အေမက ဒို႔နဲ႔မခြဲဒို႔နဲ႔ပဲအတူေအးအတူ ပူအမွ် (တကယ္က ဒို႔အပူမွန္သမွ်သူကယူမွ်ခံစား)ေနခဲ့တာ ။ သူ႔မိခင္အရင္းအခ်ာကို..,ငါတို႔ေတြက အပိုင္စီးထားငါတို႔ေက်ာသားေတြရဲ႕ အတၱဝမ္းကသားရင္းကို ထိရွသူဝမ္းနည္းလွေရာ့မယ္ ။ ဝမ္းမနာသားသမီးေတြက…,အေမ့ကိုအပိုင္ရအေမ့ကိုခ်စ္ၾက […]
Kim (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏သား) မွေးနေ့ဆုတောင်း.
Kim (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏သား) ေမြးေန႔ဆုေတာင္း…ေနာက္ဆုံးျမန္မာလိုေျပာသြာတာ’အေမ က်န္းမာပါေစ’တဲ့ ဗ်ာ…. မူဗီေလးၾကည့္ၿပီးဘာေျပာရမွန္းကိုမသိေအာင္ ဆြံ႕အ မိရပါတယ္… ေအာက္ဆံုးတြငိ႐ုပ္သံဖိုင္ပါသည္… Kim (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏သား) မွေးနေ့ဆုတောင်း…နောက်ဆုံးမြန်မာလိုပြောသွာတာ’အမေ ကျန်းမာပါစေ’တဲ့ ဗျာ…. မူဗီလေးကြည့်ပြီးဘာပြောရမှန်းကိုမသိအောင် ဆွံ့အ မိရပါတယ်… အောက်ဆုံးတွငိရုပ်သံဖိုင်ပါသည်… Kim (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏သား) ေမြးေန႔ဆုေတာင္း…ေနာက္ဆုံးျမန္မာလိုေျပာသြာတာ’အေမ က်န္းမာပါေစ’တဲ့ ဗ်ာ…. မူဗီေလးၾကည့္ၿပီးဘာေျပာရမွန္းကိုမသိေအာင္ ဆြံ႕အ မိရပါတယ္… ေအာက္ဆံုးတြငိ႐ုပ္သံဖိုင္ပါသည္… Kim (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏သား) မွေးနေ့ဆုတောင်း…နောက်ဆုံးမြန်မာလိုပြောသွာတာ’အမေ ကျန်းမာပါစေ’တဲ့ ဗျာ…. မူဗီလေးကြည့်ပြီးဘာပြောရမှန်းကိုမသိအောင် ဆွံ့အ မိရပါတယ်… […]
အမေစု မွေးနေ့ဆုတောင်း အတွက် ကျနော်တို့ ညနေခင်းကဗျာ❤️🙏
မွေးနေ့ဆုတောင်း အတွက် ကျနော်တို့ ညနေခင်းကဗျာ❤️🙏 သာယာကြည်လင်အေးမြတဲ့ မိုးကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာ အမေစုရဲ့အပြုံးတွေ မြင်ခွင့်ရချင်ပြီ…❤️🙏 “ကျန်းမာဘေးကင်းတဲ့ ၇၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ”🙏 မွေးနေ့ရက်မြတ်မှ စတင်ပြီး အမေစု ကျန်းမာပါစေ ၊ အသက်ရှည်ပါစေ၊ ဘေးကင်းပါစေကြောင်း နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးက ဆုတောင်းမေတ္တာများ ပို့သလိုက်ပါတယ်။ #ကိုပေါက် မြန်မာပြည် အစွန်ဖျားတစ်နေရာ “အမေ့စကား” ပြည်ထောင်စုဆိုတာ နိုင်ငံရေးအရတင်မဟုတ်ဘူး လူမှုရေးအရပါ စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စ။ ဒါကြောင့် ကျမတို့တိုင်းရင်းသားများဟာ ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးတွေ […]
ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်လာတဲ့ မိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ မိုင်းဆွဲခံရလို့
ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်လာတဲ့ မိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ မိုင်းဆွဲခံရလို့ အလောင်းတွေကိုဖောကားနဲ့ ၂ ခါသယ်ရ ယင်းမာပင်၊ ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၂၂။ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ဖိုဝင်တောင်နယ်မြေအတွင်း မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ကို ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့က ယင်းမာပင်မြို့နယ် ဒေါင်းမင်းအဖွဲ့က မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ ချင်းတွင်းရိုမ မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတာဝန်ခံက မြေလတ်အသံကို ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ မနက် ၉ နာရီခန့်က ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင် လိုက်ပါလာတဲ့ အင်အား ၃၀၀ ခန့်ပါ […]
ဖရဲသီးသတင်း.ပါ.. မှားခဲ့ရင် လည်ဖြတ်…အတိကျနော်…။
ဖရဲသီးသတင်း… မှားခဲ့ရင် လည်ဖြတ်…အတိကျနော်…။ .. … ….. ပထမဆုံး​အသိပေးချင်တဲ့အချက်ကတော့.. ဖရဲသီးဆိုတာ အမြင်မှာ အစိမ်းဖြစ်ပြီးအတွင်းမှာ နီရဲနေတတ်တဲ့ အမျိုးပါ။ တချို့ ဖရဲသီးများကတော့… အပြင်မှာအဖြူရောင် အစိမ်းဖြော့ စသဖြင့် တည်ရိှနေတတ်ပြီး.. အတွင်းမှာလည်း အနီ အဝါ စသဖြင့်ပေါ့… တချို့လဲ လေးလေးနက်နက်နဲ့ချိုပြီး တချို့ကတော့ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဆိုတော့.. စျေးကွက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့… ပြည်တွင်းဖရဲသီးစျေးကွက်က ပျက် မသွားပေမဲ့… အဓိက ပို့နေရတဲ့ တရုတ်နယ်စပ်ပေါက်တွေ ပိတ်ထားလို့… […]